DAAWO:Duqa Muqdisho oo ku hanjabay in maxkamadd lasoo hor taagi doono hogaamiye kooxeed kasta oo dalka soo maray “Muuse Suudi Maku Jiraa?” – Puntlandtimes
DAAWO:Duqa Muqdisho oo ku hanjabay in maxkamadd lasoo hor taagi doono hogaamiye kooxeed kasta oo dalka soo maray “Muuse Suudi Maku Jiraa?”
April 9, 2019 Abdurahmaan Editor
MUQDISHO(P-TIMES)- Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa sheegay in maalinay ahaataba lala xisaabtami doono hogaamiye kooxeed kasta oo dad dilay hantida danta guudna boobay.
“Dalkan wuxuu gaari doonaa maray ahaataba in lala xisaabtamo qof kasta oo dambi ka galay, nin kasta oo hoggaamiye kooxeed ahaa nin kasta oo dad dilay iyo nin kasta oo hanti boobay” ayuu yiri Eng. Yariisow.
Hadalkan ayaa kusoo beegmaya xili maamulka gobolka Banaadir uu bishii hore soo saaray amar ku saabsan in laga guuro xerada Mariino oo ay lahayd ciidamada Badda, waxaana dhulkaas dhistay saraakiil ciidan, mas’uuliyiin iyo xildhibaano uu ku jiro Senator Muuse Suudi Yalaxow oo kamid ahaa hogaamiye kooxeedyadii hore ee Somalia kaas oo diiday inuu ka guuro xeradaasi iyadoo arintan ay ka dhalatay xiisad culus.
Gudoomiye Yariisow ayaa sheegay inaysan waxba iska badalin mowqifkiisii ahaa in la isaga guuro xerada Mariino ee ciidanka Badda Soomaaliya.
Mar uu ka hadlayey ujeedada ay ka leeyihiin goobaha ay amreen in laga guuro ayuu sheegay gudoomiye Yariisow inay tahay mid ay ku doonayaan in goobahan looga dhigo deegaano diblomaasiyadeed oo ay degaan safaaradaha.
“Dadka maanta ku doodaya inay dokumenti u haysato xerada Mariino waa ayaan daro markoodii horeba inay dukumintii qaataan oo loo sameeyo ma ahayn, wax soconaayana maba ahan” ayuu yiri gudoomiye Yariisow.
Waxa uu dhinaca kale xusay in dadka degan xerada Mariino oo uu ku jiro Senator Muuse Suudi Yalaxow aysan malayshiyo beeleed keensan karin.
“Ma jirto cid looga haybaysanayo fulinta danaha Qaranka wayna naga go’an tahay in dhulka xerada Mariino la baneeyo” ayuu intaas ku daray Eng. Yariisow oo waraysi siinayey Somali Cable TV.